Ihlukana phakathi i-West, kusolwa uKhuzani ngokuba yixoki | News24
Ihlukana phakathi i-West, kusolwa uKhuzani ngokuba yixoki
Durban - Baxabana bodwa abaculi abawumbimbi abazibiza nge-West kulandela ukusolana bodwa ngokuthi omunye wabo (uKhuzani) uyixoki uhlala ngamagama abanye kubahleli bemicimbi yesintu emakhoneni bese kuvaleleka bona.
ILANGA LengeSonto lithole ukuthi bahlangene phezulu kanti phansi bangamahele njengoba bungasekho ubudlelwano obuhle phakathi kukaKhangelani "DsD" Mhlongo, uDlubheke "Mdlwane" Khuzwayo, Mfezemnyama "Ngqeshe" Khumalo, noKhuzani "iNdlamlenze" Mpungose.
Ukugqama kokungahoshelani kwabo kubheduke emuva kokuwina kukaKhuzani izindondo ezintathu emncintiswanani waMantshontsho kaMasikandi okubalwa neyeBest Masikandi kuzona njengoba uKhangelani ephumele obala kwelinye lamaphephandaba wazwakalisa ukungathokozi ngokushaywa kwakhe kuwona lo mkhakha ebebewubanga noKhuzani nabanye abaculi.
Abalandeli boSaziwayo nabakaKhuzani abasadlelani neze nasezinhlakeni zokuxhumana, bathi ukushaywa kwabo akugculisi, bathi uKhuzani uhlomule kungafanele.
Ekhuluma naleli phephandaba uKhangelani uthe akukho ukungahoshelani phakathi kwabo kodwa akathokozile ngendlela okwenzeke ngayo kwehlulwa iqembu lakhe loSaziwayo.
Uthi lusazokuba khona umbimbi lwabo kodwa ukhulunyiswe wukuthi akathandi ukuhlala nesilonda ngaphakathi enhliziyweni.
"UKhuzani angilwi naye futhi ngamufonela ngamubongela ngokuhlabana kwakhe kodwa abantu engikhala ngabo abomncintiswano, kubukeka bengibambe ngophondo ngoba ngayabazi abalandeli boSaziwayo bayazimisela uma bevota," kusho uKhangelani.
Ngakolunye uhlangothi uDlubheke uthi kumele kucace ukuthi alukho umbimbi phakathi kwabo ngoba baqhubana ngamadolo, kubanjwana ngengqondo.
Ebuzwa ukuthi kungani naye esezibiza ngenkosi yomasikandi ngoba ohlangothini lwabo lwase-West, uKhuzani nguyena obizwa ngenkosi kanti kolwase-East bavumelana ngazwi linye abaculi bangakhona bathi nguMjikijelwa "iChalaha" Ngubane inkosi njengoba olwangakhona lubophele u-Ali Mgube, Abafana bakaMgqumeni, Jaivazimnike neGcokama Elisha, uthe: "Ayikho inkosi eyabekwayo, wonke umuntu uyazibeka," kusho uDlubheke.
Kulokho uKhangelani uthi asikho isivumelwano abasakhile sokuthi kuzobekwa uKhuzani eqhulwini kwesobukhosi njengoba kwenzeka e-East. Ephawula ngalokhu uMfezi uthi alumsizi umbimbi, kunalokho ubona lumshonisa phansi. Utshele leli phephandaba ukuthi usefuna ukusebenzisana nabo bonke abaculi.
Ebuzwa uKhuzani ngokungahoshelani kwabo uthi okwamanje usematasa nokukhangisa i-albhamu yakhe entsha ephume ngePhasika.
"Ngisabungaza ukuwina kwami izindondo. Angigabile ngokukhuluma ngoba ukukhula kwami kuzobonakala kwiMpucuzeko maduze," kusho uKhuzani.